ခရစ္စမှတ်အချိန်။ | White Boy Learning Burmese
December 24, 2012 by Win Hein	8 Comments
8 thoughts on “ခရစ္စမှတ်အချိန်။”
၀င်းဟိန်းလည်း ချစ်သောမိသားစုနဲ့အတူ ပျော်စရာခရစ္စမတ် ပိုင်ဆိုင်ပါစေရှင် 🙂
Candy ကိုတောင် အမလို့ခေါ်ရင် ကိုဝင်းဟိန်းက အတော်ငယ်အုံးမယ့်ပုံပဲ။ ဒါမှမဟုတ် လေးစားမှုအရခေါ်တယ်ပဲမှတ်လိုက်မယ်။ ဒီနေ့ မနက်မှ နောနော်ရဲ့ သီချင်းကို “အဖြူကောင်”ကဆိုထားတယ်ဆိုတာကနေ အမှတ်မထင်တွေ့မိပြီး စိတ်ဝင်စားလို့ ဆက်တိုက် ဆက်စပ်ပြီး ဖတ်နေ၊ ကြည့်နေတာ နေ့လည်စာလွတ်ပြီး အချိန် ၂ နာရီလောက်ကုန်သွားပြီ။ ပြောချင်တာက တစ်ခြားစာစု အောက်မှာ မှတ်ချက်ပေးခဲ့သလိုပဲ ကျွန်မတို့ လူမျိုးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ နဲ့ ဘာသာစကားတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လက်လှမ်းမှီသလောက် ကူညီပေးပါ့မယ်လို့။
မရေးတာကြာပြီ”ဖြစ်တဲ့”အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော့်”တ”ခြားမိသားစုနဲ့ရှိပါတယ် (တခြား is for spoken Burmese while အခြား is used for written Burmese. As your tone on this post is in spoken Burmese, we should use အခြား)။ ဒီမြို့မှာ မြန်မာလိုပြောတတ်တဲ့လူမျိုးတွေ နည်းနည်းရှိပါတယ်။ ဒီမြို့မှာ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ နဲ့ ချင်းလူမျိုးရှိပါ”တယ်”။ ဒါပေ”မဲ့” သူတို့နဲ့သိပ်မတွေ့ဘူး။ ဒီနေ့ (ခရစ္စမှတ်နေ့မဟုတ်သေးပေ”မဲ့”) ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဆောင်တွေ ဖွင့်ပြီးပြီ။ ဒါပေ”မဲ့” ကျွန်တော်တို့အတွက် အဓိက”က” လက်ဆောင်တွေမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်မိသားစု”က” ခရစ်ယာန်းဘာသာ ကိုးကွယ်”တာ”ကြောင့် (or ကိုးကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်) သခင်ယေရှု”ရဲ့” မွေးဖွားခြင်းက အရေးကြီးဆုံးပဲ။ ဒါပေ”မဲ့” “တစ်”ကမ္ဘာလုံးမှာ တခြားဘာသာ ကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးတွေလည်း ခရစ္စမှတ်နေ့ကို “ဆင်နွှဲကြတယ်” (if you want to say non-Christians also celebrate Christmas)။ အဲဒါကိုနားလည်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို”တော့” ကျွန်တော့် အမေလည်း ခရစ်ယာန်ဘာသာမကိုးကွယ်ပေ”မဲ့” ခရစ္စမှတ်နေ့”ကို ကျင်းပပါတယ်” (another way to say celebrate)။ ခင်ဗျားတို့ ခရစ်ယာန်းဘာသာမကိုးကွယ်ရင် ရပါတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးပြုပြီး မှတ်မိ”ဖို့”က (to say “to remember” or you can also say “မှတ်မိရမှာက” which means “what one should remember”) လက်ဆောင်တွေထက် မိသားစု၊ ကောင်းချီးမင်္ဂလာ၊ နဲ့ “ပေး”ဆပ်”ခြင်း”က “အရေးပို”ကြီးပါတယ် (not sure what this is but if you want to say it is more important, it should be “အရေးပိုကြီးပါတယ်”)။
February 25, 2013 at 05:02
Hope you don’t mind all those repeated corrections. ^^
Nope, I love them! You’re doing exactly what I want every single person who reads this to do 😀
“မှတ်မိရမှာက” လို့ပြောပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
အားစိုက်ထုတ်ပြီး ကြိုးစားရေးထားတဲ့ ၀င်းဟိန်းကိုရော… အမှားတွေကို သေချာပြင်ပေးသွားတဲ့ ညီမ mydaydream ကိုရော တွေ့ရတာ ၀မ်းသာတယ်… ဒါနဲ့ ၀င်းဟိန်းဆိုတဲ့ နာမည်လေး ရလာတဲ့ အကြောင်းလဲ ပိုစ့်ရေးပါအုံး…. သိချင်လို့…